Ilwareed.com » Waa Maxay Laab-jeex? Maxaana lagu daweeyaa?
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa ka codsaday Baarlamaanka Soomaaliya inay codka kalsoonida siiyaan Ra’iisul Wasaaraha cusub Daawo sawirro:-Adeerka hogaamiyaha waqooyiga Kuriya Kim Jong-un ayaa xalay saqdii dhexe la dal dalay Dibad bax balaaran oo lagu taageerayo Ra’izul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya oo hada soconaya Musharax Cabdiweli Cali Gaas oo booqdey degmada Ufeyn ee gobolka Bari – Sawiro Dr.Faroole: Mushariixinta kulankooda waa soo dhaweyn, SOMALI LINKS
Waa Maxay Laab-jeex? Maxaana lagu daweeyaa?
November 9, 2012 - Written by ilwareed - Edited byilwareed Laabjeex iyo gaastrikada waa xanuun ay sababto aashitada caloosha. Dadka qaba dhibkaan waxay sheegayaan inay cunooyinka qaarkod uga darto sida waxylaaha la shiilay, suugada, basbaaska ama cabitaanka aashitada leh.
Badanaa qofku waa iska fiicnaadaa maalmo kadib hase yeeshee waa soo noq-noqotaa waxaana la socon kara labo-labo iyo caloosha oo hurta. Dadka noocaas ah waxay u baahan yihiin inay ka fogaadaan cunooyinka hibaya isla markaana qaataan kaniini hoos u dhigta aashitada sida Zantac ama Losec. Waxaa haboon inaad dhakhtar u tagtid haddii calaamaduhu aad u daran yihiin, ama ay isbadalaan ama aad ku fiicnaan waydo daawooyinka aashitada yareeya.
Dadka aysan calaamadahoodu uusan darnayn ama ay marmar ku dhacdo waxaa ku filan maalmo ama isbuucyo ay qaataan Losec (Omeprazole) hal mar maalintii quraacda ka hor ama Zantac (Ranitidine) laba jeer maalintii. Dhakhtar la tasho haddii dhowr maalmood kadib aadan ku fiicnaan daawooyinkan, ama ay isla markii la joojiyo daawada ay calaamaduhu soo noqdaan.
Calaamadaha aashitada caloosha waxay mararka qaarkood shabahi karaan kansarka caloosha ama jadiinka sidaas darteed waxaa haboon inaad dhakhtar u tagtid haddii calaamadahaas ay kuu dheer yihiin arimahan soo socda:
o 45 sano jir iyo wixii ka sii wayn oo ay calaamadahaas ku cusub yihiin, ka soo darayaan ama ay isbadaleen
Dadka ay u weheliyaan calaamadahaan soo socda da’day doonaan ha jiraane:
o Caatow ama miisaan lumid aan lagu talagalin
o Dhiig yaraan (aneemiyo)
o cunada oo jadiinka ku istaaqta, laqitaanka oo lagu dhibtoodo ama xanuun la socdo
o Matag, gaar ahaan mid dhiig la socdo
o Horay u qabay nabar caloosha ama laga qalay.
o Cagaarshow ama maqaarka oo cagaar noqda
Haddii aadan hubin xaaladaada fadlan u tag dhakhtarkaaga ama anaga nala soo xiriir si aan talo dheeraad ah kuu siino ama kuugu diyaarino tuubada caloosha lagu soo fiiriyo (Endoscopy).
qaado hal ama laba kaniini nus saac quraacda ka hor
Qaado hal kaniini laba jeer maalintii, quraacda iyo cashada